आज (असोज ७)को राशिफलः तपाईंको शेयर कारोबार, व्यापार, व्यवसाय कस्तो रहला ?| Corporate Nepal
Tuesday, October 26, 2021 | मंगलबार ०९ कार्तिक, २०७८
आज (असोज ७)को राशिफलः तपाईंको शेयर कारोबार, व्यापार, व्यवसाय कस्तो रहला ?
असोज ६, २०७८ बिहिबार ०५:२५
आज २०७८ साल आश्विन महिनाको ७ गते बिहीबार, आश्विन कृष्णपक्षको तृतीया तिथि । आज सोह्रश्राद्ध अन्तर्गत तृतीया श्राद्ध ।
पेशागत जीवन र आम्दानीमा केही सकारात्मक नतिजा देखा पर्ने छ । मनमा दुविधा अत्याधिक आउन जाँदा निर्णय क्षमतामा कमि आउने छ । दाम्पत्य जीवनमा द्वन्द र बादबिबाद देखा पर्ने भएकाले सतर्क भएर अघि बढ्दा उचित हुने छ । राजनीति, व्यवस्थापन, किराना पसल, वकालत, शिक्षा क्षेत्रमा आवद्धहरुलाई फाइदा मिल्ने छ । शेयर क्षेत्र अनुकुल तर्फ ढल्कने छ ।
पेशागत जीवनमा विभिन्न समस्याहरु देखा पर्न जाने भएकाले धैर्यतासाथ पाइला चाल्नु होला । मनोबल कमजोर भएको व्यक्तित्व हुने छ भने शरीरिक कमजोरीले सताउने छ । साझेदारीमा गरिएका काममा समस्या देखा पर्न जाने छ । होटल, रेष्टुरेण्ट, सुरक्षा निकाय, खेल जगत, सर्जरी जस्ता क्षेत्रमा सक्रियहरुलाई समय कठिन देखिन्छ । शेयर क्षेत्रले प्रतिफल दिने छैन् ।
दृढ खालको व्यक्तित्व हुनेछ । तर पारीवारिक जीवनमा कटुताले द्वन्द निम्त्याउने छ । मनमा उदासिताले निकै सताउने छ । निराशाजनक विचार मनमा आउने हुँदा यस विषयमा सतर्क रही सकारात्मक विचारबारे मन केन्द्रीत गर्दा उपयुक्त हुने छ । आयात निर्यात र पर्यटन क्षेत्रमा आवद्धहरुलाई समय चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । शेयर क्षेत्र औसत रहने छ ।
चतुरतामा बृद्धि हुने भएता पनि रिस कडा हुने हुँदा कतिपय कामहरु बिग्रिन पुग्ने छन् । पेशागत जीवन अनुकुल रहँदा समेत आफुलाई भाग्यले साथ नदिएको जस्तो आभाष भइरहने छ । यस विषयमा सचेत रहनु होला । हार्डवेयर, निर्माण सामग्री, कल कारखाना, स्टेसनरी, शिक्षा क्षेत्र आदीमा संलग्नहरुलाई समय अनुकुल रहने छ । शेयर क्षेत्र सकारात्मक रहने छ ।
मनमा अत्यन्त उदासिनता आउने छ । खुशी तथा दुःखमा आँखाबाट आँशु आउने स्वाभाव हुने छ । पेशागत जीवन औसत रहन खोजेता पनि पेशा व्यवसायको विषयलाई लिएर मनमा पिर थपिने छ । पानी, आइसक्रिम, दुग्ध पदार्थ, चिसो पेय पदार्थ, मदिरा, मांस पदार्थ जस्ता व्यवसायमा संलग्नहरुलाई समय प्रतिकुल छ । शेयर क्षेत्र भने सकारात्मक रहने छ ।
भाग्यको साथ रहेकाले कतिपय विषय वस्तु बिग्रिन खोजे जस्तो हुँदा हुँदै पनि सकारात्मक नतिजा दिनेतर्फ ढल्कन जाने छन् । आम्दानीमा गिरावट आउँदा त्यसले मनमा र आन्तरिक चतु¥याईँमा नकारात्मक असर पार्ने छ । शिक्षा क्षेत्र, अध्यापन, शिक्षण, स्टेसनरी जस्ता व्यवसायमा संलग्नहरुलाई फाइदा मिल्ने छ । शेयर क्षेत्र हल्का अनुकुल रहने छ ।
पेशागत जीवन अस्थिर बन्ने छ । सेवा क्षेत्रमा रहेकाहरुलाई समय धेरै प्रतिकुल नबने पनि व्यावसायमा रहेकाहरुलाई भने जोखिमपूर्ण समय रहेकाले सतर्क भइ पाइला चाल्नु होला । भाग्यहिनताको आभाष हुन जाने छ । ठेक्कापट्टा, निर्माण, साहसिक व्यावसायका क्षेत्रहरुमा सक्रियलाई समय चुनौपूर्ण रहेको छ । शेयर क्षेत्र प्रतिकुल रहने छ ।
अध्ययन अध्यापनमा मन जाने छैन् । मनोबल कमजोर हुनेछ । रक्तचाप तथा शारीरिक अवस्थामा असन्तुलन देखा पर्ने छ । बोलीमा कडापन देखा पर्ने भएकाले यस बारेमा सचेत रहनु होला । पारीवारिक जीवनमा सकारात्मकता थपिने छ । शारीरिक परिश्रम गर्ने क्षेत्रमा आवद्धहरुले सचेत रहनु पर्ने समय छ । शेयर क्षेत्र शुभ रहने छैन् ।
भाग्यको साथ रहेको छैन् । त्यसले गर्दा मेहनत अनुसारको प्रतिफल नआउँदा यसले कर्मप्रति निराशाजनक भाव बढाउने हुँदा धैर्य भएर कर्म गर्न भने नछोड्नु होला । पर्यटन, ट्राभल्स एजेन्सी, किराना पसल, राजनीति, ठेक्कापट्टा आदी जस्ता क्षेत्रमा सक्रियहरुलाई समय प्रतिकुल छ । शेयर क्षेत्र केही शुभतर्फ रहने छ ।
आम्दानीका विषयमा मनमा असन्तोष बढ्ने देखिन्छ । सोचेको जति आम्दानी नभए पनि आम्दानीको अवस्था निराशाजनक पनि हुने छैन् । भाग्यहिनताको महशुस हुने हुँदा कर्मको मात्रा बढाउनु पर्ने छ । अध्ययनमा पटक्कै मन जाने छैन् । भित्रि बुद्धिको सक्रियतामा भारी गिरावट आउने छ । पेशागत जीवनमा धैर्य भएर पाइला चाल्नु होला । शेयर क्षेत्र शुभ देखिँदैन् ।
मनमा उदासिनता बढ्न जाने छ । समय प्रतिकुल रहेकाले धैर्यता नगुमाई पाईला चाल्नु होला । प्रतिष्पर्धीले धेरै पेल्ने छन् । पेशागत जीवनमा अस्थिरता आउने छ । मनोबलमा कमजोरी देखा पर्ने छ भने शारीरिक रुपमा पनि कमजोरीहरु देखा पर्न जाने छन् । जीवनसाथिको साथ लिएर काम गरेमा केही राहत अवश्य मिल्ने छ । पेशागत र व्यावसायि जीवनमा जोखिमपूर्ण कदम नचाल्नु होला । शेयर क्षेत्र भने केही सकारात्मक रहने छ ।
दृढताले भरिएको व्यक्तित्व हुने छ । रिस कडा उत्पन्न हुने भएकाले रिस नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनु होला । साझेदारीमा गरिएका काममा समस्या देखा पर्ने भएकाले बेलैमा सचेत भएर अघि बढ्नु होला । दाम्पत्य जीवनको विषयमा मनमा चिन्ता बढ्न पुग्ने छ । पेशागत तथा व्यावसायिक जीवनका यात्रा उतार चढावपूर्ण देखिन्छ । शेयर क्षेत्र अनुकुल रहने छ ।
कात्तिक ७, २०७८ सोमबार
आज (कात्तिक ८)को राशिफलः तपाईंको व्यापार, व्यवसाय, शेयर कारोबार कस्तो रहला ?
कात्तिक ६, २०७८ आइतबार
आज (कात्तिक ७)को राशिफलः तपाईंको व्यापार, व्यवसाय, शेयर कारोबार कस्तो रहला ?
कात्तिक ४, २०७८ शुक्रबार
आज (कात्तिक ५)को राशिफलः कस्तो रहला तपाईंको पेशा, व्यापार, व्यवसाय ?
कात्तिक ३, २०७८ बिहिबार
आज (कात्तिक ४)को राशिफलः तपाईंको व्यापार, व्यवसाय, शेयर कारोबार कस्तो रहला ?
आज (कात्तिक ३)को राशिफलः कस्तो रहला तपाईंको व्यापार, व्यवसाय, शेयर कारोबार ?
आज (कात्तिक १)को राशिफलः कस्तो रहला तपाईंको व्यापार, व्यवसाय, शेयर कारोबार ?
सिटिजन्स बैंकले सीईओलाई दियो एक करोड ३१ लाख तलव भत्ता, दशैं खर्च साढे नौ लाख
रेटिङमा नपरेका विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरु प्रतिवन्धित्, फाइलै रोक्न थालिसक्यौंः सिलवाल
ब्याजदर उफ्रिएर माथि गइरहँदैन, राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानी गरिरहेकै छ: प्रवक्ता ढकाल
नाति नातिनीसहित धुलिखेलमा जिपलाइन खेल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
मेलम्ची खानेपानीको बाँधस्थल पुनःनिर्माण शुरु भएन, उपत्यकामा अब पानी कहिले आउला ?
नेपाल एसबिआई बैंकको अध्यक्षमा राजिव अरोरा चयन, गभर्नरबाट लिए सपथ
निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा पूर्व कर्मचारी अधिकारी नियुक्त, डिमप्रकाशको अधिकार खोसियो
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको अध्यक्षमा घिमिरे नियुक्त
सस्तो ब्याजदरमा सवा लाख ऋणीले लिए पौने दुई अर्ब सहुलियत कर्जा